Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Trinidad na Tobago iji kwado mmemme mmemme nka kacha mma nke Caribbean
Trinidad na Tobago iji kwado mmemme mmemme nka kacha mma nke Caribbean
A ga-anabata ndị ọbịa kachasị na Caribbean na ememme ọdịnala na Trinidad na Tobago site na August 16th ka 25th. Ememe Caribbean nke Arts (CARIFESTA) dị na afọ nke iri na anọ ma gbasaa ihe karịrị afọ iri abụọ ka ibu ọrụ maka ịme ememme ahụ gafere n'agwaetiti dị iche iche na mpaghara ahụ.
N'afọ ndị gara aga, CARIFESTA abụrụla ihe na-akpali akpali maka ọ bụghị naanị iwusi njikọta mpaghara n'etiti mba ndị Caribbean, ndị ọrụ aka na ndị omenaala. Ememme a dị iche iche abụwo mpempe akwụkwọ maka ndị Caribbean ka ọ bụrụ ebe etiti, site na iweta isi ihe mere agwaetiti ji baa ọgaranya na ụwa.
Na 2019, isiokwu nke ememme ahụ bụ "Jikọọ, Kee, Tinye ego", nke a na-egosipụtakwa ebumnuche kachasị elu nke Caribbean n'ozuzu ya, nke bụ njikọta mpaghara. Dị ka ndị ọbịa n'afọ a, Trinidad na Tobago ga-egosipụtakwa ọnọdụ ya dị ka Mecca na okike Caribbean ka a na-akpọ agwaetiti abụọ ahụ Isi Obodo Omenala nke mpaghara ahụ. Agwaetiti ndị ahụ bụ ebe Carnival nọ, "ihe ngosi kachasị ukwuu n'ụwa", na enwere oke ọ asụ ka ebe a na-aga iji gosipụta na ịzụ ahịa ọdịbendị nke Trinidad na Tobago na mpaghara Caribbean na ndị ọzọ nke ụwa site na CARIFESTA XIV.
Ka ọ dị ugbu a, mba iri abụọ na otu edebanyere aha maka CARIFESTA XIV ebe ọ bụ na enwere obi ụtọ banyere ikike maka ọdịbendị ha ịkekọrịta n'ihe bụ n'ezie oghere na-emepụta ihe. Ọ bụrụ n’ịdị atụmatụ ịbịakwute CARIFESTA XIV na Trinidad na Tobago lelee anya maka mmemme okike na ngosipụta nke Egwu, Dance, Theater, Film, Visual Arts, Literary Arts, Culinary Arts, Fashion, Folklore and Craft N'ime ụbọchị iri (21), ị nwere ike ịmikpu onwe gị na Trinidad na Tobago ma nwee ahụmịhe na nka na ọdịbendị nke ụwa a.
Isi mma ma ọ bụ ehiwe bụ Ememme Obodo anyị na Queen's Park Savannah na Port nke Spain na ihe omume satịlaịtị na-eme n'ọtụtụ oghere ndị ọzọ na na gburugburu isi obodo mara mma. Ihe omume anyị bụ isi ga-abụ Island Beats Super Concert gosipụtara arụmọrụ site na omume mba dị iche iche dịka Grammy Award Winning Artist Shaggy, French Caribbean Zouk band Kassav, Soca Super Star Machel Montano na Queen nke Soca Calypso Rose.
Maka ozi ndị ọzọ, banye na igbankwu.net ma lezie anya maka ngwa anyị ga-ewepụta ngwa CARIFESTA XIV nke ga-adị maka ngwaọrụ gam akporo na iOS.
Caribbean ememme Island Mecca Spain Tobago Trinidad Trinidad na Tobago
Ireland: Ọganihu nke ndị mbata mba ụwa site na 2018 ruo 2022
Holland America's Westerdam na-enyocha mba asatọ dị n'Eshia na oge 2019-20